Caqliga Farmaajo: “Janan shalay danbiile maanta waddani”! | KEYDMEDIA ONLINE
Caqliga Farmaajo: “Janan shalay danbiile maanta waddani”!
Waxaa saacadaha soo aadda la rajeynayaa in Wasiirkii hore ee Jubbaland Cadirashiid Janan lagu soo dhaweeyo Magaalada Baled-Xaawo ee Gobolka Gedo, oo u soo goostay dhanka Dowladda Fadaraalka.
BALED-XAAWO, Soomaaliya – Waxaa Baled-Xaawo ka socda qaban qaabada loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta Wasiirka ka soo baxsady Jubbaland ee Cabdirashiid Janan kaas oo u soo wareegay dhanka Dowladda.
Cabdirashiid Janan ayaa lagu sawiray degaanka Najax ee duleedka Beled-xaawo isagoo taleefoon dhagta u saran yaahay, wuxuuna tuuladaas ugu hakaday, kadib markii uu dib u dhac gaaban ku yimid safarka Taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo qorshuhu ahaa inuu kaga hor maro magaalada.
Dowladda Federaalka ayaa bishii Janaayo 2020-kii, shaacisay inay xabsiga dhigtay Cabdirashiid Janan, iyadoo ku eedeysay in loo haysto dambiyo culus, hayeeshee, bilowgii Sebtembar 2019 ayaa la xaqiiyay inuu ka baxsaday xabsiga.
Hay’adaha amaanka ayaa xilligas sheegay in ay ku raad-joogaan soo qabashada Janan, waxaana shacabka la amray in ay soo sheegaan halkii ay ku arkaan, hayeeshee, maanta ayaa laga dhigayaa halyey qaran waxaana wufuud is daba jooga ah kusii qul-qulayaan Gedo si ay u soo dhaweeyaan Janan.
Ma jirto maxakamad Janan la saaray oo uu isaga difaacay eed loo heystay, tani waxa ay ka dhigan tahay in Farmaajo eedeysanaha uu rabo uu waddani ka dhigi karo, muwaadinkii ka soo hor jeestana uu dambiile ku sunti karo.